Wararka Maanta: Isniin, Aug 2 , 2021-Maamulka gobolka Hiiraan iyo Taliska Militariga gobolka oo si kulul u eedeeyay AMISOM
Guddoomiye Cali Jeyte ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan aay si cad uga diideen iney kala qeyb qaataan ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalada ay kula dagaalamayaan Al-shabaab.
"Waxaan leeyahay shaqada ciidamada AMISOM dib haloo eego sababto ah ma qabtaan shaqadooda, waxay aheyd iney la dagaalaman Al-shabaab, aniga waxan ahay guddomiyahii gobolka waxan xaq ulaha iney i ilaaliyaan, anagoo dagaal u baxnayna way naga hareen sadax bilood ayaan ku qalqalineynay iney nala galaan howlgalada Shabaab aan kula dagaalameyno aniga iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo aan waliba ugu tagnay xarumahooda wayna naga diideen" ayuu yiri guddoomiye Jeyte.
Taliyaha ciidanka Militariga gobolka Hiiraan ee guutada 5-aad qeybta 27-aad Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay ayaa sidoo kale dhankiisa ku eedeeyay in ciidamada AMISOM aysan wax shaqo ah ka qaban gobolka Hiiraan afartii sano ee lasoo dhaafay.
"Taangiga ciidanka AMISOM afar sano ka hor meeshii la dhigay ayuu wali ku baakiman yahay wax shaqo ah oo lagu qabtay majirto mudada uu dalka madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maba u maleysid iney yihiin ciidan nabad ilaalin u joogo dalka" ayuu yiri Taliye Baakaay.
Eedeyntan kulul ee kasoo yeertay maamulka gobolka Hiiraan iyo taliska ciidanka ayaa imaaneysa xili mudo todobaad ah ciidamo uu hoggaaminayay guddoomiye Cali Jeyte ay howgalo lagula dagaalamayo Al-shabaab ka wadeen inta u dhaxeeysay magaalooyinka Baledweyne iyo Maxaas, kuwaas oo dib ugu soo laabtay Baledweyne.